နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော 4G ကွန်ရက်နှင့် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် ၀န်ဆောင်မှုများအား တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့် ထောက်ပံ့ကာ စွမ်းရည်မြှင့်တင်သွားမည့် Mytel – DigitalTimes.com.mm
Mytel မှ နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းမှုကိုယ်စားပြုရန် မြန်မာသရုပ်ဆောင် နေတိုးနှင့် ဗီယက်နမ်မင်းသမီး Nguyen Tran My အား Mytel သံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ဇွန်လ ၉ရက် ၊ ၂၀၁၈ – ရန်ကုန်မြန်မာ – မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ Mytel မှ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပေးအပ်သွားမည့် ၄င်း၏ ၀န်ဆောင်မှု နှင့် products များအကြောင်းကို ယနေ့တွင် Pullman Yangon, Centerpoint Hotel ၌ တရားဝင်ကြေညာလိုက်သည်။ MyTel ၏ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကို အကောင်းဆုံးဖော်ညွှန်းနိုင်သည့် L သဏ္ဍာန်ရှိ စင်မြင့်ထက်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကပြဖျော်ဖြေမှုဖြင့် အခမ်းအနားအား စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Mytel ၏ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ဝန်ဆောင်မှုမိတ်ဆက်အခမ်းအနားသို့ မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မဟာသရေစည်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lieutenant General ဦးစိန်ဝင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦးသာဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E, Lieutenant General, TRẦN ĐƠN၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးချုပ် H.E. NGUYỄN MINH HỒNG၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်သံအမတ် H.E. LUẬN THUỲ DƯƠNG၊ Viettel အဖွဲ့ကြီး၏ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ် NGUYỄN MẠNH HÙNG၊ ဗီယက်နမ်အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် Viettel အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ Mytel ၏ ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်စိုး၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. NGUYỄN THANH NAM၊ Mytel ၏ ရှယ်ယာဝင်များဖြစ်သော Star High Public Company နှင့် Myanmar National Telecom Holding Public နှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ တတ်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် Mytel မှ အကယ်ဒမီသုံးဆုရှင် နေတိုး နှင့် ဗီယက်နမ်ကြယ်ပွင့် Miss Nguyen Tran My တို့အား Mytel ၏ သံတမန်များအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ Mytel နှင့် Mytel ၏ သံတမန်နှစ်ဦးတို့သည် မြန်မာပြည်သူ လူထု၏ ဘဝများအား မြှင့်တင်ပေးလိုခြင်း၊ မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေခြင်း စသည့် တူညီသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ခေတ်အမီဆုံး ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ Mytel သည် 2G နှင့် 4G ကွန်ရက်ကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး စတင်မိတ်ဆက်သည့်အချိန်မှာပင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် 4G ကွန်ရက် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော အော်ပရေတာလည်းဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတွင် ဖိုင်ဘာကေဘယ်လ် ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀၀ တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဖိုင်ဘာoptic အခြေခံအဆောက်အအုံတပ်ဆင်မှု အားလုံး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ Mytel ၏ 2G နှင့် 4G ကွန်ရက်စုစုပေါင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်၊ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ကို လွှမ်းခြုံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုသည် ဈေးကွက်တွင်းရှိ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများထက် သာလွန်သောအချက်လည်း ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် VoLTE နည်းပညာသည် သုံးစွဲသူများကို ဒေတာ နှင့် အသံ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြုနိုင်စေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကွန်ရက်အရည်အသွေးကိုလည်း ရရှိစေသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ပိုမိုပြည့်စုံသော အတွေ့အကြုံများကို ခံစားရရှိ နိုင်စေရန် IT အပလီကေးရှင်းများမှအစ အမျိုးအစားစုံလင်သော ဝန်ဆောင်မှုများပါရှိသည့် သီးသန့်ဒစ်ဂျစ်တယ် ဂေဟစနစ်ကိုလည်း ဖန်တီးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော နည်းပညာများကို နားလည်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် Mytel သည် သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်ကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးပြီး အလုပ်ခွင်မှာသာမက လူနေမှုဘဝမှာပါ အဆင်ပြေချောမွေ့လွယ်ကူစေမည့့်် အရည်အသွေးမြင့်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
“Mytel အနေနဲ့ မြို့ ပြဒေသမှအစ ကျေးလက်ဒေသများအထိ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကို ပေးအပ်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းပေါ် ခေါ်ဆောင်သွားမယ့် လှုပ်ရှားမှုမှာ တစ်ခန်းတစ်ကဏ္ဍက ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းအားဖြင့် လူတိုင်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သာမကပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်ကစတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ Mytel ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် 4G အင်တာနက်နဲ့ တခြားသော ဝန်ဆောင်မှုပေါင်းများစွာကို ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်” ဟု Mytel ၏ ပြင်ပဆက်ဆံရေးအရာရှိချုပ် ဦးဇော်မင်းဦးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး မြန်ဆန်သောအင်တာနက်နှင့်အတူ Mytel မိုက်တယ် package ဖြင့် ပထမတစ်လအတွင်း ၄၀၀၀ ကျပ်တည်းဖြင့် အင်တာနက် ၅ GB နှင့် မိနစ် ၂၅၀ ရရှိနိုင်မည့် ခံစားခွင့်နှစ်ဆ အစီအစဉ်ကို ကြေညာခဲ့သည်။ သုံးသလောက်ပေးအစီအစဉ်တွင်လည်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသက်သာစေပြီး ၁ MB လျှင် ၅ ကျပ်၊ ၁ မိနစ် ၁၀ကျပ်နှုန်းဖြင့် သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Mytel SIM ကဒ်စတင်သုံးစွဲမည့်သူများအတွက် ၁၅၀၀ MB နဲ့ မိနစ် ၁၅၀ ရရှိမည့် အစမ်းသုံးအစီအစဉ်ကိုလည်း ပထမ ၃ လတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သုံးစွဲသူများအတွက် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်ရရှိနိုင်မည့် ငွေဖြည့်အစီအစဉ်ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများနှင့် ရင်းနှီးမှုရယူလိုသော Mytel သည် ရိုးရှင်းသော ငွေဖြတ်စနစ်ဖြစ်သည့် charging block 1s + 1s ဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုရာတွင်ကြာသည့်အချိန်အလိုက်သာ ငွေကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
“Mytel ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခရီးစဉ်အစကို ဒီလိုမျိုး မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အင်မတန် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ညီမ ငုရင်မိုင်ရော ကျွန်တော်ရော ဒီလိုမျိုးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ပြောမပြတက်အောင် ဝမ်းသာရပါတယ်။ အခုလို အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကောင်းမွန်လာတော့ မြို့ရွာကအစ ကျေးလက်ဒေသ တွေမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရိတ်သတ်နဲ့ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ခွင့်ရပြီး ပိုမိုနီးစပ်လာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။” ဟု သရုပ်ဆောင်နေတိုးမှ ပြောကြားခဲ့သည်၊။
အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံ၏ လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်အတွက် ကြီးစွာအထောက်အကူပြုသွားမည့် Mytel ၏ စုံလင်လှသည့် ခေတ်မီသော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ခေတ်မီပညာရေး၊ ခေတ်မီကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ခေတ်မီမြို့တော်နှင့် Mytel ဒစ်ဂျစ်တယ် လူမှုဘ၀စသည့် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများကို ပြသခဲ့ပါသည်။ အခြေခံကျသော နည်းပညာမှအစ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများမှတဆင့် စီးပွားရေးနှင့်ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ခေတ်မီသော လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာစေရန် Mytel မှ ရည်ရွယ်ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် MyTV၊ MyMusic၊ MyClip နှင့် MyNews ကဲ့သို့သော ဆန်းသစ်တီထွင် အပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ၊ သုံးစွဲသူများ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေမည့် Product များကိုလည်း Mytel မှမိတ်ဆက်ပေးသွားခဲ့သည်။
Mytel သည် နေပြည်တော်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့်် ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ ပိုင်းဒေသများ၌ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကနဦး လုပ်ငန်းစတင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးသို ကွန်ရက်အသင့်ဖြစ်မှုအနေအထား အကောင်းဆုံး အချိန်တွင် ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်သွားနိုင်ရန် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ယခုကဲ့သို့ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ ဝန်ဆောင်မှုမိတ်ဆက်ပွဲမှတဆင့် နိုင်ငံတွင်း နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး အသုံးပြုနိုင်သော 4G ကွန်ရက်ကို စတင်ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ Mytel 4G SIM ကဒ် နှင့် ငွေဖြည့်ကဒ်များ ကို နိုင်ငံအနှံ့ရှိ အမှတ်တံဆိပ်အရောင်းဆိုင်ပေါင်း ၅၀၊ တဆင့်အရောင်းဆိုင်ပေါင်း ၅၀၀၀၀ တွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MYTEL ကုမ္ဗဏီသည် ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေး ဈေးကွက်သို့ နောက်ဆုံးဝင်ရောက်လာသည့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သော ကုမ္မဏီဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ ၁၁ ခု နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ရှေ့ပြေးဈေးကွက်များတွင် ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကျော်တိုင် အတွေ့အကြုံရှိသည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Viettel ကုမ္ဗဏီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ Mytel သည် သုံးစွဲသူအကြိုက် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုက်ညီသည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို အထူးပြုရင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်အား နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများဖြင့် မောင်းနှင်ကာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအား ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို အဓိကပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Mytel သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံး 4G ကွန်ရက်နှင့် ခေတ်အမီဆုံး ဆက်သွယ်ရေး အခြေခံအဆောက်အဦးများထောက်ပံ့ပေးပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ကူးပြောင်းရန်နှင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ၏ လူမှုဘ၀များကို စွမ်းအားမြှင့်တင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက pr@passionmyanmar.com သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
နောကျဆုံးပျေါ ခတျေမီဆနျးသဈသော 4G ကှနျရကျနှငျ့ ဈေးနှုနျးသငျ့တငျ့သော ဒဈဂဈြတယျ ဝနျဆောငျမှုမြားအား တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနှငျ့ ထောကျပံ့ကာ စှမျးရညျမွှငျ့တငျသှားမညျ့ Mytel
Mytel မှ နှဈနိုငျငံပေါငျးစညျးမှုကိုယျစားပွုရနျ မွနျမာသရုပျဆောငျ နတေိုးနှငျ့ ဗီယကျနမျမငျးသမီး Nguyen Tran My အား Mytel သံတမနျအဖွဈ ခနျ့အပျ
ဇှနျလ ၉ရကျ ၊ ၂၀၁၈ – ရနျကုနျမွနျမာ – မွနျမာနိုငျငံ၏ စတုတ်ထမွောကျ ဆကျသှယျရေး အျောပရတော Mytel မှ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာဖွငျ့ ပေးအပျသှားမညျ့ ၎င်းငျး၏ ဝနျဆောငျမှု နှငျ့ products မြားအကွောငျးကို ယနတှေ့ငျ Pullman Yangon, Centerpoint Hotel ၌ တရားဝငျကွညောလိုကျသညျ။ MyTel ၏ နောကျဆုံးပျေါနညျးပညာကို အကောငျးဆုံးဖျောညှနျးနိုငျသညျ့ L သဏ်ဍာနျရှိ စငျမွငျ့ထကျတှငျ စိတျလှုပျရှားစရာ ကပွဖြျောဖွမှေုဖွငျ့ အခမျးအနားအား စတငျဖှငျ့လှဈခဲ့သညျ။
Mytel ၏ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာ ဝနျဆောငျမှုမိတျဆကျအခမျးအနားသို့ မွနျမာ့တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ မဟာသရစေညျသူ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Lieutenant General ဦးစိနျဝငျး၊ ဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုဝနျကွီး ဦးသာဦး၊ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနမှ ကိုယျစားလှယျမြား၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားမှတာဝနျရှိသူမြား၊ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရအဖှဲ့ ကိုယျစားလှယျမြား ၊ ဗီယကျနမျနိုငျငံ အမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး H.E, Lieutenant General, TRẦN ĐƠN၊ ဗီယကျနမျနိုငျငံ သတငျးအခကျြအလကျနှငျ့ ဆကျသှယျရေး ဝနျကွီးခြုပျ H.E. NGUYỄN MINH HỒNG၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျသံအမတျ H.E. LUẬN THUỲ DƯƠNG၊ Viettel အဖှဲ့ကွီး၏ ဗီယကျနမျနိုငျငံ ဥက်ကဌ ဗိုလျခြုပျ NGUYỄN MẠNH HÙNG၊ ဗီယကျနမျအစိုးရအဖှဲ့ နှငျ့ Viettel အဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူမြား၊ Mytel ၏ ဥက်ကဌ ဦးခငျမောငျစိုး၊ အမှုဆောငျအရာရှိခြုပျ Mr. NGUYỄN THANH NAM၊ Mytel ၏ ရှယျယာဝငျမြားဖွဈသော Star High Public Company နှငျ့ Myanmar National Telecom Holding Public နှငျ့ ဖိတျကွားထားသော ဧညျ့သညျတျောမြား တတျရောကျခဲ့ကွသညျ။
အခမျးအနားတှငျ Mytel မှ အကယျဒမီသုံးဆုရှငျ နတေိုး နှငျ့ ဗီယကျနမျကွယျပှငျ့ Miss Nguyen Tran My တို့အား Mytel ၏ သံတမနျမြားအဖွဈ ခနျ့အပျခဲ့သညျ။ Mytel နှငျ့ Mytel ၏ သံတမနျနှဈဦးတို့သညျ မွနျမာပွညျသူ လူထု၏ ဘဝမြားအား မွှငျ့တငျပေးလိုခွငျး၊ မွနျမာ-ဗီယကျနမျ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးကို ပိုမိုခိုငျခံ့ကောငျးမှနျစခွေငျး စသညျ့ တူညီသောရညျရှယျခကျြမြားဖွငျ့ လကျတှဲလုပျကိုငျခွငျးဖွဈသညျ။
ခတျေအမီဆုံး ဆကျသှယျရေးအျောပရတော Mytel သညျ 2G နှငျ့ 4G ကှနျရကျကို ထောကျပံ့ပေးသှားမညျဖွဈပွီး စတငျမိတျဆကျသညျ့အခြိနျမှာပငျ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာဖွငျ့ 4G ကှနျရကျ ပံ့ပိုးပေးနိုငျသညျ့ တဈခုတညျးသော အျောပရတောလညျးဖွဈသညျ။ တဈနှဈကြျောကာလအတှငျးတှငျ ဖိုငျဘာကဘေယျလျ ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀၀ တပျဆငျနိုငျခဲ့ပွီး မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးရှိ ဖိုငျဘာoptic အခွခေံအဆောကျအအုံတပျဆငျမှု အားလုံး၏ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုငျခဲ့သညျ။ Mytel ၏ 2G နှငျ့ 4G ကှနျရကျစုစုပေါငျးသညျ မွနျမာနိုငျငံ လူဦးရေ၏ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့၊ မွို့နယျပေါငျး ၃၀၀ ကြျောကို လှမျးခွုံနိုငျမညျဖွဈသညျ။ အဆိုပါ ကှနျရကျလှမျးခွုံမှုသညျ ဈေးကှကျတှငျးရှိ ဆကျသှယျရေးအျောပရတောမြားထကျ သာလှနျသောအခကျြလညျး ဖွဈသညျ။ နောကျဆုံးပျေါ VoLTE နညျးပညာသညျ သုံးစှဲသူမြားကို ဒတော နှငျ့ အသံ တဈပွိုငျနကျတညျး အသုံးပွုနိုငျစပွေီး ပိုမိုကောငျးမှနျသော ကှနျရကျအရညျအသှေးကိုလညျး ရရှိစသေညျ။ သုံးစှဲသူမြားအနဖွေငျ့ ပိုမိုပွညျ့စုံသော အတှအေ့ကွုံမြားကို ခံစားရရှိ နိုငျစရေနျ IT အပလီကေးရှငျးမြားမှအစ အမြိုးအစားစုံလငျသော ဝနျဆောငျမှုမြားပါရှိသညျ့ သီးသနျ့ဒဈဂဈြတယျ ဂဟေစနဈကိုလညျး ဖနျတီးပေးသှားမညျဖွဈသညျ။ နောကျဆုံးပျေါ ခတျေမီဆနျးသဈသော နညျးပညာမြားကို နားလညျပိုငျဆိုငျထားသညျ့ Mytel သညျ သုံးစှဲသူမြား၏လိုအပျခကျြကို အကောငျးဆုံးဖွညျ့ဆညျးပေးပွီး အလုပျခှငျမှာသာမက လူနမှေုဘဝမှာပါ အဆငျပွခြေောမှလှေ့ယျကူစမေညျ့ျ့ အရညျအသှေးမွငျ့သော ဝနျဆောငျမှုမြားကို ပေးအပျသှားမညျဖွဈသညျ။
“Mytel အနနေဲ့ မွို့ ပွဒသေမှအစ ကြေးလကျဒသေမြားအထိ နောကျဆုံးပျေါနညျးပညာမြားကို ပေးအပျရငျး မွနျမာနိုငျငံကို ဒဈဂဈြတယျလမျးကွောငျးပျေါ ချေါဆောငျသှားမယျ့ လှုပျရှားမှုမှာ တဈခနျးတဈကဏ်ဍက ပါဝငျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုလုပျဆောငျပေးခွငျးအားဖွငျ့ လူတိုငျးက တဈယောကျနဲ့တဈယောကျသာမကပဲ တဈကမ်ဘာလုံးနဲ့ ဆကျသှယျခြိတျဆကျသှားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျကစတငျပွီး မွနျမာနိုငျငံက သုံးစှဲသူတှအေနနေဲ့ Mytel ရဲ့ အရညျအသှေးမွငျ့ 4G အငျတာနကျနဲ့ တခွားသော ဝနျဆောငျမှုပေါငျးမြားစှာကို ဈေးနှုနျးသကျသကျသာသာနဲ့ အသုံးပွုနိုငျပွီဖွဈပါတယျ” ဟု Mytel ၏ ပွငျပဆကျဆံရေးအရာရှိခြုပျ ဦးဇျောမငျးဦးမှ ပွောကွားခဲ့သညျ။
ပိုမိုကောငျးမှနျပွီး မွနျဆနျသောအငျတာနကျနှငျ့အတူ Mytel မိုကျတယျ package ဖွငျ့ ပထမတဈလအတှငျး ၄၀၀၀ ကပျြတညျးဖွငျ့ အငျတာနကျ ၅ GB နှငျ့ မိနဈ ၂၅၀ ရရှိနိုငျမညျ့ ခံစားခှငျ့နှဈဆ အစီအစဉျကို ကွညောခဲ့သညျ။ သုံးသလောကျပေးအစီအစဉျတှငျလညျး ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးသကျသာစပွေီး ၁ MB လြှငျ ၅ ကပျြ၊ ၁ မိနဈ ၁၀ကပျြနှုနျးဖွငျ့ သုံးစှဲနိုငျမညျဖွဈသညျ။ Mytel SIM ကဒျစတငျသုံးစှဲမညျ့သူမြားအတှကျ ၁၅၀၀ MB နဲ့ မိနဈ ၁၅၀ ရရှိမညျ့ အစမျးသုံးအစီအစဉျကိုလညျး ပထမ ၃ လတှငျ အသုံးပွုနိုငျမညျဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ သုံးစှဲသူမြားအတှကျ ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျးပွနျလညျရရှိနိုငျမညျ့ ငှဖွေညျ့အစီအစဉျကိုလညျး မိတျဆကျပေးခဲ့သညျ။ ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာလုပျငနျးလုပျဆောငျခွငျးဖွငျ့ သုံးစှဲသူမြားနှငျ့ ရငျးနှီးမှုရယူလိုသော Mytel သညျ ရိုးရှငျးသော ငှဖွေတျစနဈဖွဈသညျ့ charging block 1s + 1s ဖွငျ့ ဖုနျးချေါဆိုရာတှငျကွာသညျ့အခြိနျအလိုကျသာ ငှကေောကျခံသှားမညျဖွဈသညျ။
“Mytel ရဲ့ ဒဈဂဈြတယျခရီးစဉျအစကို ဒီလိုမြိုး မကျြမွငျကိုယျတှပေ့ါဝငျခှငျ့ရတဲ့အတှကျ အငျမတနျ ဂုဏျယူမိပါတယျ။ ညီမ ငုရငျမိုငျရော ကြှနျတျောရော ဒီလိုမြိုးပါဝငျခှငျ့ရတဲ့အတှကျ ပွောမပွတကျအောငျ ဝမျးသာရပါတယျ။ အခုလို အငျတာနကျဝနျဆောငျမှုတှကေောငျးမှနျလာတော့ မွို့ရှာကအစ ကြေးလကျဒသေ တှမှောရှိတဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပရိတျသတျနဲ့ ဆကျသှယျခြိတျဆကျခှငျ့ရပွီး ပိုမိုနီးစပျလာနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။” ဟု သရုပျဆောငျနတေိုးမှ ပွောကွားခဲ့သညျ၊။
အခမျးအနားတှငျ နိုငျငံ၏ လူမှုစီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုဖွဈစဉျအတှကျ ကွီးစှာအထောကျအကူပွုသှားမညျ့ Mytel ၏ စုံလငျလှသညျ့ ခတျေမီသော လယျယာစိုကျပြိုးရေး၊ ခတျေမီပညာရေး၊ ခတျေမီကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု၊ ခတျေမီမွို့တျောနှငျ့ Mytel ဒဈဂဈြတယျ လူမှုဘဝစသညျ့ နညျးပညာဝနျဆောငျမှုမြားကို ပွသခဲ့ပါသညျ။ အခွခေံကသြော နညျးပညာမှအစ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာမြားမှတဆငျ့ စီးပှားရေးနှငျ့ပညာရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျပွီး ခတျေမီသော လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးတဈခုပျေါပေါကျလာစရေနျ Mytel မှ ရညျရှယျကွိုးပမျး လုပျဆောငျသှားမညျ ဖွဈသညျ။
ထို့အပွငျ MyTV၊ MyMusic၊ MyClip နှငျ့ MyNews ကဲ့သို့သော ဆနျးသဈတီထှငျ အပိုဆောငျးဝနျဆောငျမှုမြား၊ သုံးစှဲသူမြား စိတျကနြေပျမှုရရှိစမေညျ့ Product မြားကိုလညျး Mytel မှမိတျဆကျပေးသှားခဲ့သညျ။
Mytel သညျ နပွေညျတျော၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ ပဲခူးတိုငျးအရှေ့ ပိုငျးဒသေမြား၌ မတျလ ၁၅ ရကျနတှေ့ငျ ကနဦး လုပျငနျးစတငျမှုမြားပွုလုပျခဲ့ပွီး မွနျမာနိုငျငံတဈဝနျးလုံးသို ကှနျရကျအသငျ့ဖွဈမှုအနအေထား အကောငျးဆုံး အခြိနျတှငျ ဝနျဆောငျမှုမြား ပေးအပျသှားနိုငျရနျ တိုးခြဲ့လုပျကိုငျခဲ့သညျ။ ယခုကဲ့သို့ တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာ ဝနျဆောငျမှုမိတျဆကျပှဲမှတဆငျ့ နိုငျငံတှငျး နရောမရှေး၊ အခြိနျမရှေး အသုံးပွုနိုငျသော 4G ကှနျရကျကို စတငျပံ့ပိုးပေးသှားမညျဖွဈသညျ။ Mytel 4G SIM ကဒျ နှငျ့ ငှဖွေညျ့ကဒျမြား ကို နိုငျငံအနှံ့ရှိ အမှတျတံဆိပျအရောငျးဆိုငျပေါငျး ၅၀၊ တဆငျ့အရောငျးဆိုငျပေါငျး ၅၀၀၀၀ တှငျ အဆငျပွလှေယျကူစှာ ဝယျယူနိုငျမညျဖွဈသညျ။
MYTEL ကုမ်ဗဏီသညျ ၂၀၁၆ခုနှဈတှငျ တညျထောငျခဲ့ပွီး မွနျမာနိုငျငံဆကျသှယျရေး ဈေးကှကျသို့ နောကျဆုံးဝငျရောကျလာသညျ့ ဆကျသှယျရေးဝနျဆောငျမှုပေးအပျသော ကုမ်မဏီဖွဈသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဝနျဆောငျမှုပေးနသေော ဆကျသှယျရေးအျောပရတော ၁၁ ခု နှငျ့ ခြိတျဆကျပွီး ရှပွေ့ေးဈေးကှကျမြားတှငျ ဆယျစုနှဈတဈစုကြျောတိုငျ အတှအေ့ကွုံရှိသညျ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံ Viettel ကုမ်ဗဏီနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကျြ ရှိသညျ။ Mytel သညျ သုံးစှဲသူအကွိုကျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ကိုကျညီသညျ့ ဝနျဆောငျမှုမြားကို အထူးပွုရငျး၊ ဆကျသှယျရေးဈေးကှကျအား နောကျဆုံးပျေါနညျးပညာမြားဖွငျ့ မောငျးနှငျကာ မွနျမာပွညျသူပွညျသားမြားအား ဈေးနှုနျးသကျသာပွီး အရညျအသှေးကောငျးမှနျသညျ့ ဝနျဆောငျမှုမြားကို အဓိကပေးအပျသှားမညျဖွဈသညျ။
Mytel သညျ မွနျမာနိုငျငံတဈဝှမျးလုံးတှငျ အကယျြပွနျ့ဆုံး 4G ကှနျရကျနှငျ့ ခတျေအမီဆုံး ဆကျသှယျရေး အခွခေံအဆောကျအဦးမြားထောကျပံ့ပေးပွီး ဒဈဂဈြတယျစနဈသို့ ကူးပွောငျးရနျနှငျ့ မွနျမာပွညျသူပွညျသားမြား ၏ လူမှုဘဝမြားကို စှမျးအားမွှငျ့တငျရနျ ဆောငျရှကျပေးနသေော ဆကျသှယျရေးကှနျရကျ တဈခုဖွဈလာစရေနျ ရညျရှယျသညျ။
အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက pr@passionmyanmar.com သို့ ဆကျသှယျမေးမွနျး နိုငျပါသညျ။